Xasuuqa Tacliinta. Qalinkii Maxamed Sidiiq |
Xasuuqa Tacliinta. Qalinkii Maxamed Sidiiq
Xasuuq ka weyni ma jiro dhallinyarada u soo kacaysa dalka oo aan loo samayn siyaasad waxbarasho, imtixaanaadka shahadiga ah ee laga qaado ardayada qaranaka dusgiyadu waxay ku tartamaan kaalmaha hore si ay ugu iibiyaan sannad dugsiyeedka cusub dusigooga. Waa la kala tagay dugsiyo dawliya oo kaalin gala hadmaa kuugu danbaysay? Waa calaamad muujinaysa tayo la’aanta taalla iyo sida ay noqotay aqoontii ardayda iyo imtixaannadkii shahadiga ahaa.
Gudoomiyaha imtixaanaku markuu yeedhinaayo imtixaanka Tayo beelka aqoonta dugsayadeena waxaad ka dheehan kartaa imtixaanadka shahdiga ah ee aanay jirin cid dhacday oo hoos martay darajadii loo baahna, waa wadda C iyo D darajada imtixaannadka la yeedhiyay ee sannadkan iyo kuwii ka horeeyay ilaa sagaalkii sanno ee u danbeeyay dugsiyada sare may jirin cid dhacday oo keentay darajada E waa hafar iyo khiyaamo caqabad keeni donta maraan fogayn!
Waxbarashada Somaliland waxay noqotay ganacsi faa’iido raadineed, waxaad arkaysa boqolaal dugsi oo magac bilan iyo xayaysiis la muuneeyay lagu ladhaayo oo weliba lagu faaninaayo waxa jooga maclimiin ajaaniba, jaamacado magaca uun ah oo aan tayadii loo baahanna lahayn balse loo furtay ganacsi lagu faa’idaysto, mushkiladaasina mustqabalka waa mid inna hortaal qaran ahaan.
Arday kastaa jaamacadd uu doono ayuu geli karaa kol hadduu taabka ku sito doolar shuruud kale oo xidhaysaa ma taal marka loo kuur galo xaqiiqda jirta maanta, tayo aqooneed lagu hubiyo heerkiisa waxbarasho inuu u qalmo in jaamacadda la qoro iyo in kale ma jirto, imtixaanka lagu xulaa maaha mid si daacada loo diyaarshay jamacaddu waxay ka fekeraysaa ganacsigeeda iyo in ay hesho arday badan. Macalimiinta aqoontooda iyo tayadoodu maaha mid la baandheeyay oo lagu kalsoonaan karo waa wada shaqo tag iyo bariis raadis.
Kol haddii siyaasadii guud ee waxbarashada qaranku aanay ahayn mid dabagal ku samaynaysa goobaha waxbarashada sidee loo heli macalin tayo leh oo soo sari kara arday tayo aqooneed leh, macalin ka baxay dusgi sare doraad waa sababta uu macalin ugu yahay arday hadda dugsiga sare ku jira ee aan loo hayn arday iyo macalin waayo aragnimo iyo aqoon is dheer.
Waa wada buug iyo boorso lagu raran yahay. Balse aqoon iyo waxbarasho dhisan oo la soo maray ma jirto, markaa waa qalfoofka qalin jabinaaya sannad kasta, dhammaan waa wadda aqoonyahan dhameeyay jamacaddo iyo dusgi sare oo aanay jirin tayo aqooneed. wasaaradda ku isman hawshaani hadalkaaba ma hayso oo dheemaalka iyo dheefta ganacsiyadaa laga hello ayaa malaha fara guudkood dufana daawaha looga qadaa! Imtixaanadka qaranku marar ayay usoo baxaan debeda mooyi si ay ku dhacdabee!
Waxaynu maqalnaa oo hubantiya sannadaha qaarkood in imtixaankuba fashilmay oo ardaydu guryahooda ku haysteen, waxa kasii daran oo xaqiiqo ah marka fasalka lagu jiro ee loo fadhiyo imtixaanka shahaadiga ah inaanu jirin macalin ilaasha ardayga xaqiiqna waxa ah in macalimiinta ilaalisa badankoogu imtixaanka shaahdiga ah ardaydu shaah siiso oo ay kala qishaan ardaydu imtixaankii dhamaa’aa ee shahaadiga ahaa halkaana waxa ku lumaysa in ay inoo soo baxaan arday kaalin gala oo aqoontoodu tahay mid dhisan oo dhamaystiran dhamaaan waxaasi dayoowga ku dhacay waxbarashadii qaranka ee markii horeba wakinaysay.
Nasiib daradda aan laga soo waaqsanayna waxay tahay in hadaan dheer lagu riddo rajadii waxbarasho aayihii, bulsho iyo astaantii ummadda. Waxa murugo mudan duminta waxbarashadii dawliga ahayd ay kula kacday wasaaraddii loo igmaday. Waxa ilmo iyo ilin miciinsi maatada baday dhalaalka waxbarashada gaarka ah loogu sameeyay taas oo keentay in ilmihii waalidkii ku qasbo iskuul gaar loo leeyahay oo aan awood dhaqaale waalidkii u ahayn, halka kii dawladuna qarka u saaran yahay in albaabada loo xidho.
Guud ahaan dugsiyadii dawliga ahaa waxay noqdeen magac iyo fasallo furan, macalimiintii tayada lahayd waxay u shaqo tageen dugsiyo aan danyare jarayn qiimahooda oo ay dhigtaan inta ladan ee goyn karaysa doolarka qadimaada ah. Meeye dugsiyadii dadka ka dhexeeyay? Ardayga aan lahayn awood dhaqaale ma haka hadho qayrkiiba? Wasaaradda waxbarashada iyo tacllinta sare waxay ahayd in ay samayso siyaasad jaangaynaysa oo kor u qaadaysa tayada aqooneed ee dugsiyadda dawliga ah si loogu dhirado oo ay usoo noqoto sumacdii iyo tayadii aqooneed ee ooli jirtay dugsiyada dawliga ah.
Dugsiyada hoose dhexe ee laga dhigay bilaashaku waa caqabada iyaguna ka mida majara habawga waxbarasho ee ka taagan dusgiyada dawliga ah, intii laga daayay fiiga ardayda waxa yimi hoos u dhac weyn wuxuunbay xaajo tahay “ Anno markii horeba ooyay ayay weylina igusii istaagtay” haddi xaal sidan sii ahaado oo xasuuqa aqoontu sii taagnaado qaran ahaan waxa dumi doona seeska aqooneed ee ummada.
Qalinkii Maxamed Sidiiq